Daawo Sawirada: Somalida lagu laayay dalka Yemen – idalenews.com
In ka badan 40 qof oo Soomaali ah, ayaa habeenkii Khamiista lagu laayay dalka Yemen, ka dib markii doonidii ay la socdeen lagu weeraray meel 15km u jirta Xeebta Magaalada Hudaydah.
Hay’adda Qaramada Midoobe u qaabilsan qaxootiga ee UNCHR, ayaa Jimcihii sheegtay in ay ka argagaxday dhimashada dad ka badan 40 qof oo Soomaali ah, kuwaa oo la weeraray iyagoo nafsadooda kala baxsanaya colaadaha dalkaasi Yemen, kuna sii jeeday Sudan.
Goobaha caafimaadka ee Magaalada Hudaydah, ayaa waxaa la soo sheegaya in la gaarsiiyay 80 qof oo qaarkood qaba dhaawacyo culus, isla-markaana ay dhibane-yaasha ka mid yihiin dumar iyo carruur.
Maleeshiyada Shiicada Yemen ee Xuuthiyiinta, ayaa waxaa la arkaayay iyagoo meydadka ka soo dejinaya doonida la weeraray. Doonidan waxaa la sheegay in ay weerartay mid ka mid ah diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca.
Sarkaal u hadlay Xoogaga Xuuthiyiinta, ayaa isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ku eedeeyay in ay ka ma’suul yihiin weerarka dhinaca cirka ee Somalida lagu laayay, mana jirto wax war ah oo illaa iyo hadda ka soo baxay Isbahaysiga Wadamada Carabta.
Isbahaysiga, ayaa billihii ugu dambeeyay duqayn culus ku haayay mucaaradka Xuuthiyiinta, iyagoo markaasi ku eedeynaya in hub sharci-darro ahi kala soo deggaan Dekeda Hudaydah.
Isbahaysiga Carabta oo gacan siinaya Dowladda Madaxweyne Abdrabbuh Mansur Hadi, ayaa bishii March ee sanadkii 2015-ka bilaabay in ay la dagaalamaan Xuuthiyiinta, oo ka arrimiya Magaalada Sanca iyo inta badan Waqooyiga Yemen. Dagaaladan waxaa lagu dilay in ka badan 10 kun oo rayid ah.
DEG DEG: Wadooyinka muhiimka Magaalada Muqdisho oo saaka xiran